Indalo isinike zonke izinto eziyimfuneko ebomini: iindlebe zokuva, impumlo ukuziva iimvumba kunye novumba, amehlo okubona. Izizathu ezahlukeneyo zingakhokelela ekubeni imbono ingaqala ukuhla. Ukufunda ngokukhanya okuphantsi, ukusebenza kwikhompyutheni, ukusebenza ngokugqithiseleyo kunye nokunye okuninzi kwenza amehlo ethu abonakale edabukisayo. Bafuna ukuba sinakekele kwaye sinyamekele, ukwenzela ukuba ekudala kakhulu ukuba wenze ngaphandle kweglasi.
Ukuzivocavoca okukhethekileyo, ukutya okunomsoco okwenzela amehlo, kwaye uya kukwazi ukugcina umbono we-100%!
Yenza ezinye ikhefu xa usebenza kwikhompyutha, jonga izinto ezikufuphi. Vumela amehlo akho aphumle. Ukuyeka ukutshaya nokusela utywala. I-Nicotine iyanciphisa ngokukhawuleza iinqanawa, ngoko zincinci, oku kuchaphazela ukujikeleza kwegazi kwentloko kunye namehlo. Hamba kaninzi ngaphambi kokulala. Ukuphumelela umzimba nge-oxygen, unceda ukubuyisela umbono.
I-Vitamin C ibaluleke kakhulu emehlweni. Hlaziya ukutya kwakho ukuze inevithamini eyaneleyo, ekhusela i-retina yamehlo ethu. Yidla izithelo ezininzi zeerrirus, i-cranberries. Akukho ncedo olungaphantsi kwimbono yamaminerali - zinc. I-microelement itholakala kwi-pepper yaseBulgaria enomtsalane, imbewu yeengqungquthela, iibhotile ezitsha. Ukuthintela i-cataracts, oogqirha babedla ukuba banike ukutya okunjalo kwizigulane. Enye into ebalulekileyo ekufuneka ifike ngokwaneleyo emzimbeni wakho ukuze kungabikho iingxaki nge-calcium. Itholakala kwimveliso yobisi, inceda ukuqinisa izicubu zeso, zilwa ne-myopia encinci.
IiVithamini E, A, i-beta-carotene, equkethe i-antioxidants, igalelo ekuqiniseni iindonga zemithambo yegazi kunye ne-capillary system, ukuphucula amehlo, ubukhali bamehlo. Iqule kwiidroti kunye ne-blueberries. Akukho nto, le mveliso ibizwa ngokuba "yikiti yokunceda yokuqala." Into ebaluleke kakhulu, iinqwelo, eziqulethwe kuyo, i-beta-carotene ayigcinwanga ngaphandle kwamafutha. Ngoko ke, uzilungiselele isaladi yeeqathe, qiniseka ukuba ukongeza ukhilimu omuncu okanye ioli yeoli.
Ngamehlo ethu, i-omega 3 ibaluleke kakhulu, i-Omega 3 ibaluleke kakhulu. Umzimba wethu awuzivelisi ngokwabo, ngoko kufuneka sinikeze ukufikelela kwizinto ezinje ezibalulekileyo. Yidla izitya zentlanzi rhoqo. Ikakhulukazi i-omega-3 acids itholakala kwi-tuna kunye ne-salum. Ijusi elincinane lemon okanye ioli yeoli iyakunceda ukuqonda le nto ibalulekileyo.
Ndibonelela iincwadi zokupheka ezininzi zempilo zamehlo ethu. Imizuzu embalwa ekhitshini, kwaye unokulungiselela umxube onempilo kunye onomsoco kwamehlo akho.
Isaladi «Iiproti kunye namantongomane».
Uya kuyidinga: iincinci ezincinci zamadnuts, i-parsley, ii-carrots ezitsha, i-2 tablespoons of ukhilimu omuncu, i-tablespoon e-oli yeoli.
I-peel izaqathe, i-grate kwi-grater enkulu. Gweba i-parsley kunye neentonga (zingatshitshiswa kwi-fine grater). Yongeza isaladi ngekhilimu omuncu kunye nebhotela. I-Stylish and elegantly ungenza isaladi. Yongeza nje imiqatha embalwa yelinki okanye i-mandarin ekhethiweyo, unokongeza i-tablespoon yobusi.
Isaladi enonophelo kunye nempilo yamehlo ilungile!
Uya kuyidinga: 200 amagremu we-mascarpone ushizi, iipunipoyi ezi-2 zeshukela, ama-gramu angama-500 ama-blueberries, iiprotheni ezi-2 ezilunyiweyo, ityuwa encinane.
Kubalulekile ukubetha i-blueberries kunye noshukela kwi-blender. Yongeza i-mascarpone, yifaka. Ubunzima obangelwayo bubekwe kwintonga kwaye ifakwe efrijini. Iiprotheni zishayelwa ngamatye (njengamanzi), zongeza ityuwa. Ngomonde uthele i-foam eninzi kwi-sorbet kwaye udibanise ne-spoon ukusuka phezulu. Faka efrijini. Ukubangela ukuba uhlalutye. Ungakwazi ukukhonza i-dessert efanelekileyo kunye nekhebulayo kwi-crockery. Ukuze umhlobiso usetyenziswe i-sprig ye-mint.
I-Salmon roll with lemon.
Uya kuyimfuneko: 2 kg ye-salum, i-2 tablespoons ye-mustard ye-granular, ityuwa, i-pepper, i-parsley, i-tarragon nedill, i-2 lemons.
Ukwenza intlanzi: uhlukanise intloko, umsila, amathambo (konke oku kunokupheka kunye nomhluzi ophekiweyo). Hlanganisa ijusi kwi-lemon enye kunye nepunipoon yesardard kunye nepunipoon yeoli yeoli. Dlulisa umxube kwinhlanzi, shiya imizuzu engama-20. Sika imifino ngokukhawuleza, nqumla i-lemon yesibili ibe yincinci. Beka phakathi kwamacala omabini kwinqanaba leentlanzi. Yongeza ityuwa, pepper, bhaka kwi-oven esandulelekile kwi-180 ° C imizuzu engama-40.
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-eggplant
Iipropati ezisebenzayo ze-sauerkraut
Iimpawu zonyango kunye nemilingo ye pyrope
Ukuphuhliswa komzimba komntwana ukususela ekuzaleni ukuya kunyaka o-1
Ziziphi iindlela zokutya ezi intombi ezihlezi?
I-Porno: jonga okanye ungaboni ndawonye?
Inkukhu kunye nama-mushroom e-shiitake
I-Shoes "Lunokhody" into ekukhethiweyo kunye nokokugqoka
Andiyazi ukuba ulinde umfana emkhosini okanye akunjalo?
Ikhuphiswano "Hlangana nehlobo lokuHlaziyiswa"
Kissel evela kumajikijolo amaqabunga, iresiphi ye-jelly esimnandi